Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » SkyWest waxay u dhaqaaqaysaa inay ka farxiso Delta Airlines
Airlines • Airport • Wararka Brazil • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
SkyWest ayaa 16 Diyaarado Embraer cusub u iibsanaysa Shabakadda Delta Air
E175 waa laf-dhabarta suuqa gobolka Waqooyiga Ameerika, iyadoo warshaduhu bilaabeen inay ka soo baxaan masiibada waxaan aragnaa baahida sii kordheysa ee muddada dheer ee diyaaradaha xuquuqaha leh si loo gaarsiiyo isku xirnaanta gudaha ee faa'iidada leh.
Embraer wuxuu oggolaaday iibinta 16 diyaaradood oo cusub oo E175 ah oo loo iibiyay SkyWest, Inc wuxuuna daaha ka qaaday asalka.
Diyaaradda oo ka kooban 76 kursi ayaa lagu gaarsiin doonaa Delta debejinta waxayna yeelan doontaa qaabeyn saddex heer ah.
SkyWest waxay durba u shaqeyneysaa 71 E175 jets oo loogu talagalay Delta Air Lines.
E175 waxay u ahayd halbawle u ah sidayaal sida ay ugu habboon yihiin dib -u -dhiska waddooyinka, ku dar jadwalka, iyo ku daridda awoodda kororka si ay ula kulmaan dib -u -soo -kabashada baahida gudaha
Embraer ayaa ogolaatay in laga iibiyo 16 dayuuradood oo cusub oo E175 ah SkyWest, Inc. si loogu hawlgalo gudaha Delta Air Lines shabakadda, oo lagu daray 71 E175 jets SkyWest ayaa durba u shaqeysa Delta Air Lines.
Diyaaradda E175 ayaa si gaar ah ula duuli doonta Delta iyadoo la raacayo Heshiiska Iibsashada Awoodda (CPA).
Qiimaha qandaraaska, oo lagu dari doono dib -u -dhaca saddexaad ee Embraer, waa USD 798.4 milyan, oo ku saleysan qiimaha liiska.
Diyaaradda oo ka kooban 76 kursi ayaa lagu gaarsiin doonaa Delta debejinta waxayna yeelan doontaa qaabeyn saddex heer ah. Bixinta waxay bilaabmaysaa badhtamaha 2022.
Madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee SkyWest, Chip Childs, ayaa yiri, “SkyWest waxay ka shaqaysaa E175s ka badan kuwa kale ee adduunka. Diyaaradahaan, waxaan yeelan doonnaa ku dhawaad ​​240 E175s oo la shaqeeya shirkadaha diyaaradaha ee Waqooyiga Ameerika. Bishan waxaan ku faannaa inaan gaarno laba milyan oo saacadood oo duulimaad ah E175. Macaamiishayadu waxay jecel yihiin E175, waxaanan ku qabnaa kalsooni weyn oo aan ku qaddarinnaa iskaashiga aan la leenahay Embraer. ”
Mark Neely, VP Sales and Marketing, Ameerika, Embraer Duulimaadyada Ganacsiga, ayaa yiri, “Wada -shaqeyntayada aadka u wanaagsan ee aan la leenahay SkyWest waxay ku sii socotaa qodobkan cusub ee Delta. E175 waa laf-dhabarta suuqa gobolka Waqooyiga Ameerika, iyadoo warshaduhu bilaabeen inay ka soo baxaan masiibada waxaan aragnaa baahida sii kordheysa ee muddada dheer ee diyaaradaha xuquuqaha leh si loo gaarsiiyo isku xirnaanta gudaha ee faa'iidada leh. E175 waxay u ahayd halbawle u ah sidayaasha sida ay ugu habboon yihiin dib -u -dhiska waddooyinka, ku dar darrooyinka, iyo ku daridda awoodda kororka si ay ula kulmaan dib -u -soo -kabashada baahida gudaha. ”